Vaovao - 2020.7.9
1.Momba ny orinasanay
Ny orinasanay dia orinasam-panompoana tokana mijanona amin'ny fampiroboroboana ny lamba, ny famolavolana ny vokatra, ny famokarana ary ny varotra. Ny vokatra lehibe dia mampiasa fikarohana sy fampandrosoana tsy miankina amin'ny lamba, toy ny latabatra spandex (velarin'ny solika / velarana fitaratra), fampiasana lamba firakotra nilona vita amin'ny kofehy, ny lamba dia milamina amin'ny tontolo iainana, fizotry ny elastika avo lenta ary manatrika ny fenitra mifandraika amin'ny fifandraisana iraisam-pirenena CNAS ; ny vokany dia mitovy amin'ny fitaovana voajanahary voajanahary, fa ny vidiny dia 1/3 fotsiny amin'ny palitao latex voajanahary, mba hahafahan'ny mpanjifa maro kokoa mankafy ny fatorana mamaivay tsotra entin'ny palitao gel, ary miaina ny rivo-piainana mahavariana amin'ny tights maoderina.
Betsaka ny haben'ny akanjonay vonona hitafy. Mba hahafahana mamorona endrika vatana bebe kokoa ao an-trano sy any ivelany, toy ny andian-dahatsoratra F sy T, ny halavany mety dia 150-180CM ny haavony, ary ny lanjany dia 40kg ka hatramin'ny 90KG. mandroso fanapahana lathe, afaka manao ny refesina habeny marina kokoa sy mahomby kokoa, ary ny CAD manokana rafitra haben'ny famokarana habe mamela ny hafainganam-pandeha nentim-paharazana nohatsaraina.
Raisinay ho toy ny tanjon'ny orinasa ny "famolavolana ny lamaody, ny fanaingoana ho an'ny lamaody", hahatonga ny lamaody ho tsara tarehy ary avelao hanao akanjo tsy maotina ny sehatra.
Fomban'ny vokatra: fanao eropeana sy amerikanina tsotra sy mahatsikaiky!
Lafiny famolavolana: atin'akanjo lamaody, lamaody mahaliana. Manaova akanjo atin'akanjo afaka hanaovanao lamaody ho lamaody kokoa!
Ny iraka ataontsika: ataovy tsara ny fiainana!
Notarihinay hatrany ny lalam-pitiavana ary nanjary tanjon'ny fanarahan-dia tao amin'ity orinasa ity izahay. Ny antsika izao, mandeha amin'ny làlana izay tian'ny sasany aleha nefa tsy sahy mandeha! MiaSein am-pahatsorana no miaraka mivondrona mpizara sy mpiara-miasa fantsona bebe kokoa hamorona marika lalam-pirenena iraisana voalohany!
Mpanamboatra loharano Source center
Indostria sy varotra fampidirana B2B
Mpanamboatra matanjaka, fiaraha-miasa manerantany
Famatsiana sisin-tany, fandefasana eran'izao tontolo izao (FedEx DHL UPS TNT ARAMEX)
Fanamboarana takelaka solosaina, famolavolana tany am-boalohany,
Fandriana fanapahana solosaina, fizahana sy fanaterana kalitaon'ny vokatra, ivon'ny serivisy ho an'ny mpanjifa
1. Fivoarana ara-materialy, famolavolana CAD, famokarana, varotra, indostria ary fomba fampidirana ara-barotra, azo fehezina ny kalitao, hiantohana ny fahombiazan'ny famokarana sy ny fahombiazan'ny fandefasana;
2. Rafitra fanaovana takelaka CAD manan-tsaina, ny rafitra fanaovana takelaka manan-tsaina namboarin'olon-tena miaraka amin'ny traikefa namboarina 10 taona dia manatsara be ny fahombiazan'ny fanaingoana sy ny haben'ny habeny;
3. Manaova fampanjariana tokana, ny hafainganam-pandeha haingana indrindra ao anatin'ny 24 ora, ny angona namboarina ho an'ny mpanjifa dia azo tazonina mandritra ny 3 taona;
4. Afaka manome akanjo fomba manokana ho an'ny mpanjifa lehibe izahay hiantohana ny fifaninanana amin'ny vokatra;
5. Ny vokatra lehibe dia karohina sy mivoatra tsy miankina. Ny lamba dia tsy fahita firy, tsy manam-paharoa ary sariaka amin'ny tontolo iainana.
3. ny lamba tsy manam-paharoa
4.Ny zava-bita vitantsika
Taorian'ny ezaka nataontsika hatrany dia nihoatra ny 1 tapitrisa dolara amerikana ny habetsaky ny varotra varotra latabatra spandex natondrantsika tany amin'ny tsena eropeana sy amerikana. Famakiana vaovao eo amin'ny tantaran'ny varotra ity. Hanohy ny fanatsarana sy fanatsarana ny vokatray izahay mba hampalaza kokoa ny vokatray. Nanakarama mpamorona vaovao izahay izay hitondra antsika fomba tsara sy malaza kokoa. Ny vokatray dia vita tsy miankina amin'ny lamba ka hatramin'ny famolavolana, famokarana ary ny varotra. Io dia ahafahantsika mifehy tsara kokoa ny kalitaon'ny vokatra, manitsy ny famokarana amin'ny fotoana mety, maheno ny hevitry ny mpanjifa voalohany ary manatsara hatrany ny serivisy famokarana. Ny vokatrao dia manana laza tsara ao an-trano sy any ivelany, ary ny varotra sehatra maro an-trano sy any ivelany dia tsy mitsaha-mitombo. Ny mpanjifanay dia misy mpankafy akanjo akanjo, ary koa mpandraharaha anatiny sy vahiny ary mpivarotra ambongadiny. Izy ireo koa dia nitazona varotra tsara. Manantena izahay fa maro kokoa ny mpanjifa sy ny mpivarotra ambongadiny no hifidy ny vokatray. Maniry izahay fa azo amidy isaky ny vazan'izao tontolo izao ny vokatray.
6. Ireo fantsom-baovaonay vaovao
Amin'izao fotoana izao, noho ny fipoahan'ny coronavirus vaovao any Shina sy manerantany, dia miahiahy mafy momba izany ny orinasanay. Miorina amin'ny traikefa anananay nandritra ny taona maro tamin'ny famokarana akanjo sy karazana fitafiana isan-karazany dia nanokatra tsipika famokarana roa izahay ho an'ny akanjo fiarovana sy sarontava. Ny akanjonay miaro dia vita amin'ny horonantsary PE azo tsofina ary ireo fitaovana tsy misy tenona mitambatra. Akanjo miaro amin'ny vatana manontolo miaraka amin'ny zipper sy hood misy azy io. Izy io dia manana loko isan-karazany ary mety tsy ho tantera-drano, tsy vovoka ary mahazaka bakteria. Izy io dia afaka mamaly ny filan'ny fiarovana isan'andro. Ny sarontava anay dia tsy mitovy amin'ny sarontava fanary mahazatra ary hafa amin'ny saron-tava KN95. Mandao ny lesoka amin'ny sarontava nentim-paharazana. Ny firafitry ny saron-tava anay dia tena lamaody, miaraka amin'ny gingham mainty sy fotsy, akanjon'ny lamba mainty tsy misy fangarony, ary ny hoditra mainty hoditra breathable. Mety amin'ny fitafian'ny ray aman-dreny sy ny zanaka izy io, ary azon'ny olon-dehibe sy ny ankizy ampiasaina. Izy io dia manana takelaka fanovana sivana ao anatiny izay azo diovina sy ampiasaina imbetsaka. Izy io dia mateza ary tsy simba, mahavonjy angovo ary sariaka amin'ny tontolo iainana, madio sy madio, tsara sy tsara tarehy. Raha tianao, dia afaka mividy amin'ny tranokalanay ianao, ary miarahaba ireo mpivarotra ambongadiny sy avy any ivelany tonga mba hifampiraharaha amin'ny fividianana.